Mikasika izay mety ho dingana tsara mankany amin'ny fampanarahan-dalàna ny rongony federaly, Chuck Schumer - Senatera ao New York - dia nanolotra volavolan-dalàna iray hanakanana ny marijuana amin'ny ambaratonga federaly ny 14 Jolay 2021.
Ny volavolan-dalàna dia antsoina hoe Fitsipika momba ny fitantanan-drongony sy ny lalàna ahafahana manararaotra, ary ny hevi-dehibe amin'ity hetsika ity dia ny fanesorana ny marijuana amin'ny lalàna mifehy ny zava-mahadomelina, mamorona programa handaminana sy handoa hetra azy io.
Na izany aza, eo ambanin'ny lalàna momba ny fitantanan-drongony sy ny lalàna manararaotra, ny fanjakana dia mitazona ny fahafaha-mametraka lalàna marijuana manokana ho azy ireo.
Ity ny fampahalalana mifandraika amin'ny lalàna momba ny fitantanan-drongony sy ny lalàna momba ny fanararaotana:
taorian'ny Ny fanaovan'i New York ara-dalàna ny rongony ampiasain'ny olon-dehibe eo ambany Ny lalàna mifehy ny Marijuana sy ny hetra, Chuck Schumer -dia ny Lehiben'ny Antenimieran-doholona Senat- nanambara fa hampiditra volavolan-dalàna federaly handaminana ny rongony izy.
Ny lalàna dia tsy nampidirina ho ao anatin'ny fonosam-pihavanana izay nifanarahan'ny Demokratin'ny Senat tamin'ny fiandohan'ity taona ity, satria nanambara i Schumer fa tsy mbola manana vato ampy io volavolan-dalàna io, na dia eo aza ny tokonam-bidy 50 nahena.
Ankoatr'izay, ny filoha Biden dia tsy nanohana azy io, ary ny Demokraty antonony sasany dia mety tsy hanohana ilay volavolan-dalàna.
Momba ny famaritana ny rongony
Ny teny hoe "rongony" dia faritan'ny fihetsika midika hoe:
Ny faritra rehetra amin'ny zava-maniry Cannabis sativa L., na mitombo na tsia.
Ny voan'ny zavamaniry.
Ny resina dia nalaina avy tamin'ny faritra rehetra tamin'ny zavamaniry.
Ny fitambarana, ny fanamboarana, ny sira, ny derivative, ny fangaro, na ny fanomanana an'io zavamaniry io, ny voany na ny résin.
Mazava izany ao amin'ny lalàna fa tsy rongony ny rongony. Ka inona no dikan'izany? Midika izany amin'ny ankapobeny fa ny rongony sy izay vita amin'ny rongony dia, ary ho raisina ho toy ny rongony. Ary ny hemp sy izay avy amin'ny hemp dia heverina ho hemp.
Ny dikan'izany amin'ny fampiharana dia ny cannabinoids any ambany toy ny delta-8 dia mety ho hemp na rongony miankina amin'ny zavamaniry namorona azy.
Hevi-dehibe amin'ilay fihetsika
Fanamelohana federaly an'i Marijuana
Ny voka-dratsy ateraky ny volavolan-dalàna ary iray amin'ireo endrika manandanja indrindra amin'ny lalàna- dia ny fepetra takian'ny mpisolovava jeneraly hanaisotra marijuana amin'ny lalàna mifehy ny zava-mahadomelina ao anatin'ny 60 andro aorian'ny fampiharana ny volavolan-dalàna.
Fa inona marina no tafiditra amin'izany? Ity lalàna ity - araka ny nanolorana azy- dia miaro ny zon'ny fanjakana hitazona ny fandrarana raha toa ka manapa-kevitra ny hanao izany ireo fanjakana ireo, ka, ohatra, tsy afaka mandefa marijuana amin'ny fanjakana mandrara ny zavamaniry ianao, satria mbola tsy ara-dalàna.
Saingy, ny fanjakana dia tsy afaka nanakana ireo orinasa tsy hitondrana vokatra rongony miampita ny sisintaniny mankany amin'ny fanjakana hafa izay avela ilay zavamaniry.
Raha izany no volavolan-dalàna. Raha te handany izany, ny FDA dia ho fahefana mifehy ny famokarana sy ny marketing ny vokatra rongony, ary ny TTB dia manana fahefana amin'ny hetra marijuana sy fomba fanao amin'ny varotra.
Anisan'ny fiantraikany lehibe indrindra, ny volavolan-dalàna hamela ireo orinasa marijuana efa miasa -na ireo izay maniry ny hiasa amin'ny ho avy- mba hiditra amin'ny rafitra banky amerikana ary hitaky ny fihenan'ny hetra federaly amin'ny fandaniana amin'ny orinasa.
Natao io volavolan-dalàna io ka ireo 21 taona no ho miakatra ihany no afaka mividy vokatra rongony fialam-boly, ary mba hampihenana ny fanodinkodinana tsy ara-dalàna, dia hofaranan'ny lalàna ny varotra rongony, milaza fa ny olon-dehibe dia tsy afaka mividy hatramin'ny 10 grama isaky ny mandeha.
Ity volavolan-dalàna ity dia mampiroborobo ny fahamarinana ara-tsosialy ho an'ireo izay voan'ny ady amin'ny zava-mahadomelina. Nambara ny volavolan-dalàna fa ireo vondrom-piarahamonina izay matetika no voakasiky ny fandrarana dia mahazo tombony kely indrindra avy amin'ny tsenan'ny marijuana ara-dalàna, mametra ny fandraisan'anjaran'ilay orinasa.
Ny iray amin'ireo sakana lehibe tsy hidiran'ny olona miloko amin'ny indostria dia izy ireo no lasibatra indrindra tamin'ny fanaovana heloka bevava rongony. Ity volavolan-dalàna ity dia manolo-kevitra ny handidy ny distrika federaly tsirairay avy mba hamongorana ny fisamborana sy ny fanamelohana noho ny fandikan-dalàna rongony tsy mahery setra ao anatin'ny herintaona, ary ahafahan'ny olona izay iharan'ny sazy ara-pitsarana noho ny rongony ihany koa mba hahazo fitsaram-bahoaka.
Ny hetsika dia mamorona programa fanomezana telo mikendry ny hamorona fotoana mety ho an'ireo olona voakasiky ny ady amin'ny zava-mahadomelina.
Ny programa momba ny famatsiam-bola ho an'ny vondrom-piarahamonina. Izay hamatsy vola ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa manome serivisy ho an'ny olona voan'ny ady amin'ny zava-mahadomelina, toy ny fiofanana momba ny asa, ny serivisy fampidirana ary ny fanampiana ara-dalàna.
Ny programa momba ny fitrandrahana rongony. Izay mikendry ny hanome famatsiam-bola ho an'ny fanjakana mendrika sy ny faritra hametrahana findramam-bola hanampiana ireo orinasa kely amin'ny indostrian'ny rongony fananan'olona sahirana ara-tsosialy sy ara-toekarena.
Fandaharana momba ny fanomezana lisansa mitovy. Izay hanome famatsiam-bola ho an'ireo fanjakana sy toerana eo an-toerana afaka mampihatra programa momba ny fahazoan-dàlana rongony izay mampihena ny sakana ho an'ireo olona tratry ny ady amin'ny zava-mahadomelina.
Ny voalohany amin'ireo programa ireo dia hotantanan'ny birao misahana ny fitsarana rongony vaovao ao amin'ny biraon'ny fandaharam-pitsarana ao amin'ny Departemantan'ny Fitsarana. Ny roa farany amin'ireo dia hampiharin'ny Small Business Administration (SBA).
Tsy misy fanavakavahana miorina amin'ny fampiasana rongony
Ny lalàna dia mandrara ny olona tsy holavina ny tombotsoam-bahoaka federaly amin'ny alàlan'ny fampiasana na fananana rongony na noho ny fiampangana na fitsarana ny famotehana zaza tsy ampy taona noho ny fandikan-dalàna rongony. Tafiditra ao anatin'izany ny fisorohana ny fanafoanana ny fisavana fiarovana ho an'ny mpiasa federaly.
Saingy, io volavolan-dalàna vaovao io dia hamela ireo masoivoho “hanohy hanisy rongony ho fitsapana zava-mahadomelina ny mpiasa federaly” izay singa iray toherin'ny ankamaroan'ny mpisolovava.
Tsy azo atao koa ny mihevitra ny rongony ho fananana voafehy ho an'ny lalàna mifindra monina. Midika izany fa ny olona tsy olom-pirenena dia tsy azo nolavina tombony na fiarovana araky ny lalàna mifindra monina mifototra amin'ny hetsika mifandraika amin'ny rongony.
Fanomezana toro-hevitra momba ny rongony ara-pahasalamana ho an'ny veterana
Araka ny volavolan-dalàna naroso dia omena alalana ny Raharaha Veterans sy ny sampan-draharaha misahana ny fahasalamana Indiana hanome toro-hevitra sy hevitra momba ny fampiasana rongony na rongony misy rongony
Ny lalàna dia hametraka taha tahan'ny hetra federaly izay hanomboka amin'ny 10% amin'ny taona voalohany aorian'ny fananganana ny volavolan-dalàna sy ny taona voalohany, manaraka ny kalandrie. Avy eo dia hampitomboina isan-taona, miakatra amin'ny 15% hatramin'ny 20% ary avy eo hatramin'ny 25%.
Manomboka amin'ny fananganana ny taona fahadimy, ny hetra dia ho "isaky ny ony na isaky ny milligraman'ny vola THC izay nofaritan'ny sekreteran'ny Tahirimbolam-panjakana mitovy amin'ny 25% amin'ny vidin'ny rongony amidy any Etazonia any Etazonia. taona lasa ”
Ireo mpamokatra rongony kely - miaraka amin'ny varotra latsaky ny 20 tapitrisa $ isan-taona- dia azo ekena amin'ny fihenan'ny 50% amin'ny tahan'ny hetra, amin'ny alàlan'ny trosa fandoavan-ketra.
Ny fahazoan-dàlana hitrandrahana rongony dia azo lavina na esorina raha tsy ampy ny toerana ialana amin'ny fisorohana hetra na fanodinkodinana, ny fanatanterahana ny trano dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna federaly na fanjakana, na ny mpangataka iray tsy mahavita manambara vaovao ara-nofo na manao fanambarana diso.
Ho fanampin'izany, ny fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny rongony dia azo lavina raha toa ka voaheloka ho nanao fandikan-dalàna ny mpangataka, izay heloka bevava nitranga taorian'ny namoahana ny lalàna sy tao anatin'ny telo taona teo aloha mifandraika amin'ny fanodinana rongony na fanalavirana hetra rongony.
Ny mpangataka dia afaka mangataka amin'ny Komity Mpanolo-tsaina ny vokatra rongony ho an'ny famotsoran-keloka manoloana ny fandikan-dalàna tsy mendrika raha toa ka hitan'ny Komity fa ny mpangataka dia nanaporofo fa ampy ny fanalefahana na fanarenana ary fitaizam-batana hitazomana ny asa rongony mifanaraka amin'ny lalàna fanjakan'ny fanjakana sy federaly.
Ny lalàna dia mitaky ny biraon'ny governemanta tompon'andraikitra amin'ny governemanta mba hanamora ny fandalinana marobe momba ny politika marijuana.
Ny Drafitra fifanakalozan-kevitra dia hitarika ny Comptroller General hitarika fanombanana ny fiatraikany amin'ny fiaraha-monina amin'ny fanjakana ara-dalàna amin'ny rongony. Amin'ity fepetra ity dia takiana amin'ny tomban'evitry ny Office Accountability Office (GAO) ny fampidirana marimaritra iraisana (na fanovana misy) fiarahamonina mety hisy fiatraikany amin'ny alàlan'ny fananganana ara-dalàna, ao anatin'izany ny fahafatesan'ny olona sy ny ratra, ny hopitaly ary ny ivon-toeran'ny tobin'ny poizina, mahery setra. ny tahan'ny heloka bevava, ny antontan'isan'ny asa, ny tahan'ny fampiasana rongony, ary ny fepetra hafa isan-karazany. Ny Comptroller General dia manana roa taona hamita ny tombana ary handefa tatitra any amin'ny kaongresy.
Ankoatr'izay, ny Drafitra fifanakalozan-kevitra dia hitarika ny Departemantan'ny fahasalamana sy ny serivisy mahaolona (HHS), miaraka amin'ny consultations amin'ny National Institutes of Health, mba hitarika na hanohana ny fikarohana momba ny fiantraikan'ny rongony. Ny fikarohana dia mety ahitana lohahevitra isan-karazany, ao anatin'izany ny vokatry ny rongony amin'ny ati-dohan'olombelona, ​​ny fiatraikany amin'ny toe-pahasalamana isan-karazany, ary ny famantarana ny mety ho tombontsoa ara-pitsaboana sy ny fampiasana rongony. Ny sekretera ny HHS dia takiana mba handinika karazana rongony isan-karazany amin'ity fikarohana ity, ary koa handefa tatitra isan-taona any amin'ny Kongresy momba ny topimaso momba ny fikarohana natao na notohanana.
Betsaka ny antsipiriany momba ilay volavolan-dalàna mitaky asa bebe kokoa. Ny rafitra fahazoan-dàlana dia mbola eo amin'ny barebones-ny. Izany rehetra izany dia eo an-tampon'ny zava-misy fa tsy azo inoana mihitsy ny handaniana ilay volavolan-dalàna.
Saingy, azo antoka fa dingana iray mankany amin'ny fananganana ara-dalàna ny rongony federaly izy io, ary mametraka ny lohahevitra amin'ny resaka mazava.
Ny drafitra hamongorana ny lalàna marijuana amin'ny federaly dia mitaky latsa-bato 60 farafaharatsiny hamakivakiana ny loholona. Ny fandrahonana lehibe indrindra ho an'ity volavolan-dalàna ity dia ny fanoherana ankapobeny ataon'ny Repoblikana sy ny demokraty antonony sasany, ary koa ny volavolan-dalàna tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny filoha Biden.
Hatreto dia fanjakana 37 sy ny Distrikan'i Columbia no nanara-dalàna ny fampiasana rongony rongony ary fanjakana 18 miaraka amin'ny DC no nanara-dalàna ny fampiasana fialamboly ho an'ny olon-dehibe.
miaraka efa ho 70% ny tahan'ny fanekena, toa fotoana fohy ihany ny fanaovana ny fanarahan-dalàna.
Tags:Fitsipika momba ny fitantanan-drongony sy ny lalàna ahafahana manararaotra, ara-dalàna rongony federaly, Vaovao momba ny fanarahan-dalàna rongony federaly